Infographics: Waxay ku fiican tahay taraafikada iyo SEO
Waa maxay macluumaadka?
Khamiis, Juun 1, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Infographics-ka ayaa soo jiray in muddo ah laakiin dhawaanahan waxay noqdeen xanaaq oo dhan. Iyada oo bogagga sida Digg dhimanayaan, suuqleyda doonaya in ay fatahaad ka helaan taraafikada boggooda waxay ku darayaan sawiro macluumaad ah oo sheeko weyn leh. Dhowr kun oo doolar, waxaad kireysan kartaa shirkad infographic ah si aad u soo saarto muuqaal xallin sare oo macluumaad ah oo muuqaal ahaan u sharraxaya dhibaatada. Shirkadda Infographic ayaa sameyn doonta cilmi baarista iyo naqshadeynta. Qaar ka mid ah shirkadaha Infographic xitaa waxay leeyihiin rukumo socda.
Infographic ku saabsan mowduuca laga bilaabo Magnetismka Macaamiisha:
Waxaa jira shirkado yar oo naqshadeynta sawirada ah halkaas, oo ay ku jiraan DK New Media, ee bixiya adeeggan. Isu socodka fayraska ee ka dhasha sawir-gacmeedka wanaagsan ayaa ah sheekada badhkeed. Maaddaama dad badani ku dhegan yihiin oo ay ka hadlaan faahfaahinta ku saabsan boggagooda iyo warbaahinta bulshada, waa istiraatiijiyad aad u wanaagsan oo loogu talagalay in lagu geeyo backlinks ganacsigaaga.
Tags: magnetism macaamiishainfographicqiimaha infographicwaa maxay infographic
Maareynta Hawshu waa ku fududahay HiTask
Agoosto 22, 2012 saacaddu markay ahayd 6:49 PM
Ku-habboonaanta macluumaadka ayaa maalin kasta ku sii kordhaya warbaahinta bulshada. Hay'adda suuqgeynta internetka ee aan doortay waxay i tustay lambarro sax ah oo ku saabsan sida waxtar u leeyihiin waxyaabahan runtii. Farriin weyn!